Nezvedu | Xuzhou Jiamei Girazi Zvigadzirwa Co., Ltd.
Xuzhou Jiamei Girazi Zvigadzirwa Co, Ltd. ibasa rekugadzira rinoshanda mukutakura kwezvizoro zvekurongedza zvinhu kumba nekune dzimwe nyika, uye zvemafuta akakosha uye zvekuzora kurongedza kumba nekunze. Inonyanya kutengesa uye kutengesa mabhodhoro ezvinonhuwira, mabhodhoro akakosha emafuta, mabhodhoro earomatherapy, mabhodhoro echizoro mafuta, nezvimwewo Makambani akanyoreswa anotenderwa nemapazi ehurumende akakodzera.
Huru zvigadzirwa ndeizvi: shava yakakosha mabhodhoro emafuta, bhuruu yakakosha oiri mabhodhoro, girini yakakosha mafuta mabhodhoro, inoonekera yakakosha mabhodhoro emafuta, machena akakosha mafuta mabhodhoro, Xilin mabhodhoro nezvimwe zvigadzirwa.
Kufananidza kugadzirwa kwemafuta anokosha epurasitiki chivharo chepurasitiki + epuraki yemukati, yakakosha bhodhoro remafuta anodized aruminiyamu chivharo, yakakosha bhodhoro remafuta anodized aruminiyamu anti-kuba kapu, yakakosha bhodhoro remafuta epurasitiki musoro girazi anodonhedza, yakakosha bhodhoro remafuta muhombe musoro cap, bakelite cap, nezvimwe.
Iwo akakosha emabhodhoro emafuta emabhodhoro akagadzirwa nemabasa akawanda anogona kuve nechokwadi chakanyanya kusimbisa uye kusagadzikana kwehurosi, kuve nechokwadi chekuti 100% yemafuta akakosha haana kuburitswa, uye haizogadziri uye kuputika.
Kambani yedu yakavambwa muna 2016.
CE, ANSI, SGS uye ISO 9001 chitupa.
Ipa iwo wakanakisa mutengo uye sevhisi
Nyanzvi, kugona kwakanyanya, rakanakisa basa timu.
Iyo cap uye plug yekudonha inogona zvakare kupa dzakasiyana dzakasiyana dzakasiyana dzekudonha kumhanya kuti usangane nekudonha kwakasiyana kwakakora kwakakosha mafuta.
Izvo zvakakosha mafuta bhodhoro akateedzana zvigadzirwa zvinogadzirwa nekuunza epamberi otomatiki girazi rinoumba muchina. Hunhu hwechigadzirwa hwakadzikama, kutsauka kwekugona kudiki, hutsanana hwakakwira, ukobvu hwemadziro ebhodhoro uye ruvara ndeyunifomu, uye simba rerubatsiro rwakakwira.
Iyo mitsara yakatetepa uye yakajairwa, uye yemukati yekumanikidza simba yakakwira. Chigadzirwa chinoshandiswa kurongedza makemikari akanaka senge akakosha ekuzadza mafuta, zvekuwedzera zvekudya, mishonga yemishonga yepakati, uye makemikari reagents.
Kuvimbika, simba uye chigadzirwa mhando yeXuzhou Jiamei Packaging Zvigadzirwa Co, Ltd. zvakave zvichizivikanwa neindasitiri. Shamwari kubva kumativi ese ehupenyu dzakagamuchirwa kushanyira, kutungamira uye kutaurirana bhizinesi.